SAWIRRO: Ciyaartoy ka socota dalka Kenya oo lagu soo dhaweeyay Madaxtooyada Maamulka Somaliland. – Kismaayo24 News Agency
SAWIRRO: Ciyaartoy ka socota dalka Kenya oo lagu soo dhaweeyay Madaxtooyada Maamulka Somaliland.
by admin 24th December 2019 0261
Dhageyso: Arimo halis ku ah Gaalkacyo iyo Gobolka Mudug oo si weyn looga digey.
Maamulka Somalinad oo Joojiyey Daawooyinka uga yimaada Magaalada Muqdisho Shuruudna ku xiray.
XOG CULUS: Dhismaha Aqalka sare ee Baarlamaanka oo fashil qarka usaaran..[MAXAA CUSUB?]
Top News: Warbixin ka hadlaysa waxa ka dhalan kara haddaan la bixin mushaaraadka Shaqaalaha iyo Ciidamada Dowladda
Top News: Hargeysa oo hoy u noqotey dilaalka!!!
admin 25th June 2015 27th August 2015